‘रअ’ को कार्यक्रममा को-को ? — Bhaktapurpost.com
‘रअ’ को कार्यक्रममा को-को ?
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेताहरूमा बेचैन पैदा भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आन्तरिक लोकतन्त्रका लागि मुकाविला गर्ने रणनीति बनाएपछि नेकपालाई बेचैन भएको हो । हुनत कांग्रेसका नेताहरूबीच मतभेद अन्त्य भएको सन्देश बाहिरी रुपमा आएको छैन ।
बाहिर दिएको सन्देश जस्तो सजिलो अवस्था कांग्रेसभित्र छैन । सभापति शेरबहादुर देउवाको निरंकुशता रहेको भन्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले असन्तुष्टि जनाइ रहेका छन् । उनले गुटको भेला गर्न छाडेका छैनन् । पौडेललाई बेलाबेला आफ्नो प्रभावमा पारेर व्यक्तिगत स्वार्थ लिँदै आएका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला पनि गुट जोगाउन संघर्षरत छन् । सिटौलाको कमजोर व्यवस्थापन र व्यक्तिवादी चरित्रका कारण उनलाई साथ दिएका नेताहरूले छाड्ने हुन् कि भनेर चर्चा हुन थालेको छ ।
कांग्रेसमा सबैभन्दा शक्तिशाली मानिने सभापति देउवा निकटका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले पनि गुट चलाउन थालेका छन् । देउवाको नाम लिएर उनले अलगै सचिवालय समेत बनाएका छन् । निधिको गुटलाई पुरुषोत्तम दाहालले हेण्डलिङ गरेका छन् । भरखरै निधिका कारण कांग्रेसको पार्टी मुख्यालयभित्र प्रवेश पाएका दाहालले बिहीबार काठमाडौंको लैनचौरस्थित एक पार्टी प्यालेसमा कार्यक्रम समेत राखेका छन् । दाहालले कांग्रेसलाई एक्लै हाँक्ने गरेर कार्यक्रमहरू धमाधम तयारी गर्न थालेका छन् ।
सहसचिवस्तरका राजदूत पुरीसँग आफ्नो हैसियत भुलेर सभामुख महरा र कांग्रेस नेता सिटौला भारतीय राजदूतावसको कार्यक्रममा सहभागी हुने कुराको विरोध भइरहेको छ । उक्त कार्यक्रममा भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का उच्च अधिकारीहरुको पनि सहभागिता रहेको स्रोतको दावी छ । यूनाइटेड पोष्ट साप्ताहिकले समाचार छापेको छ ।